छाडापनको यो हद : टेलिभिजनमा बज्छ ‘तपाईको कत्रो छ ?’ – YesKathmandu.com
सञ्चारमाध्यमले अश्लिल र झूठा विज्ञापन प्रसारण गर्न हुँदैन । यि त सबै कागजी नियम मात्र भए । तर अचेल पैसाको लोभमा जस्ता विज्ञापन पनि बज्न थालेका छन । यस्कै पछिल्लो उदाहरण हो हास्यकलाकार सन्दिप क्षेत्रीको कलर्स मोवाइलमा देखिने दोहोरो अर्थ लाग्ने भद्धा विज्ञापन । जुन विज्ञापन तपाईको टेलिभिजन सेटमा प्रसारण हुँदै गर्दा यो विज्ञापन परिवारको साथैमा बसेर सुन्न र हेर्ने लाजमर्नु छ । वा त च्यानल चेन्ज गनुपर्दछ वा देखे नदेखेझैं गर्नुपर्दछ ।सञ्चार माध्यमले जे सिकाउछ,जे देखिन्छ साना साना बालबच्चाहरुको दिमागमा त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्दछ । र,उनीहरु पनि त्यस्कै नक्कल गर्न थाल्छन । सन्दिप क्षेत्री जस्ता नाम चलेका कलाकार पैसाको लोभमा यसरी सस्तो विज्ञापनमा देखिनु लाजमर्दो कुरा हो ।
उनै हास्यकलाकार सन्दिप क्षेत्रीले डाक्टरलाई भन्छन ‘तपाईको कत्रो छ ?’बसिरहेका डाक्टर जंगिदै उठ्छन ! फेरी, डाक्टरसंग सोधिन्छ, तपाईको कत्रो छ भन्दै । कुरा मोवाइलमा लगेर जोडिन्छ । न त विज्ञापनको शैली र कुराको सन्र्दभनै मिल्छ । विज्ञापनको अन्त्यमा सोध्ने व्यक्तिले कर्लस मोबाइलका बारेमा विस्तृत जानकारी दिएको देखाइन्छ ।
नेपाली दर्शकलाई देखाउनका लागि भारतको नक्कल गरेर कर्लस मोवाइलले अश्लिलता थोपर्ने काम गरेको छ । आफ्नो विज्ञापन नै गर्नु थियो त अरु श्रृजनशील शव्द केही भेटेन ?
उसो त सन्दिप क्षेत्रीको भद्धा र अश्लिल लाग्ने यो मात्र यस्तो विज्ञापन होइन उनले यस अगाडि एनसेलको विज्ञापनमा खेले । त्यो पनि उस्तै छाडा र भद्धा देखिन्थ्यो । एनसेलको लाष्टै ठूलो अफर नाम दिइएको उक्त विज्ञापनमा समेत यस्तो दृश्य देखिने । प्यान्ट फुत्केको फुत्कै गरेको र पाइन्टको चेन लगाउन नसकेको दृश्य अश्लिलता केन्द्रीत छ ।
यस प्रकारको अश्लिल र भद्धा विज्ञापनको कुरा संसदमा समेत उठ्न थालेको छ । नेपाली काँग्रेसकी सचेतक ईश्वरी न्यौपानले अश्लिल विज्ञापनका बारेमा सँसदमा कुरा उठेको जानकारी दिइन् ।
Purna Chandra Ghimire says:
यि दुबै बिज्ञापनले अस्लिलतोको सिमानै नाघेकोछ तुरन्त प्रसारणमा रोकलगाईनु पर्दछ।
ब्यञ्जनकार धर्म says:
बिज्ञापन भनेको जुन सामान बजार आई रहेछ त्यसको बिशेषता सहितको सुन्दरदंगले प्रस्तुत गरी ब्यापारमा बढाउनु हुनु पर्नेमा यस बिज्ञापन निर्माता,संबाद,कलाकार र बिज्ञापनको प्रसार समेतको मानसिक दरिद्रता प्रष्ट उदागिन्छ जसको असर समाजमा सोहि दरिद्रता सामाजिकरणका भै रहेछ।यसको जिम्मेवारी इमान्दारीपुर्वक हामीले पनि लिनै पर्छ। समाज सुद्ददीकरण हामी प्रत्येक सभ्य नागरीकको कर्तब्य हो।
राखेपबाट विष्टलाई हटाउने निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नगरः सर्वोच्च
खिमा सापकोटाले ल्याइन यो दशैं तिहार -भिडीयो हेर्नुहोस
राष्ट्रपतिको र उपराष्ट्रपतिको चुनाव २१ गते चैत ३ गते गर्ने आयोगको प्रश्ताब
एमालेलेलाई हराउन दूतावासमा गोप्य योजना बने : योगेश भट्टराई
जब प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र रामचन्द्र पौडेललाई सिस्नुपानीले हानियो …
दाहाल सरकारका ६ महिनाः चीनलाई चिडाउने भारततिर लम्पसार
लट्री परेको प्रलोभन देखाइ ठगी गर्ने ३ जना पक्राउ